MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: "Dalka laguma sii-hayn karo KMG, mana jirto duruuf kallifaysa in KMG lagu sii jiro" Axad, May 06, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed oo hadal dheer ka jeediyay kulankii furitaanka shirkii odayaasha-dhaqanka ee Muqdisho ka furmay ayaa sheegay inaanu dalka ku jiri karin KMG, isagoo xusay inaysan jirin duruuf kallifaysa in lagu sii jiro.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka: Madaxweynuhu mar uu ka hadlay dastuurka ayuu sheegay inaysan jirin ummad noolaan karta dastuur la'aan; isagoo sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dastuur la sameeyo, balse ay ugu horreysay 1960-kii, wuxuuna intaas raaciyay in sannadihii burburka loo baahday in la sameeyo dastuur dhameysiran.
Siyaasadda dalka: Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan dad badan oo siyaasadda daneynaya, wuxuuna xusay inaysan jirin cid ay si gaar ah ugu xiran tahay oo ay u furan tahay cid walba oo Soomaali ah, isagoo sheegay inay doonayaan in nidaamkii hore laga bedelo oo ahaa wax duminta iyo in wax lagu raadiyo si aan fiicnayn.
Ugu dambeyn, wuxuu madaxweynuhu sheegay in DKMG ah ay soo dhaweynayso qof walba oo fikir fiican kusoo biirinaya, isagoo sheegay in dadka looga baahan yahay inay dhexda u xirtaan sidii dalka uu isbedel uga dhici lahaa.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Axad, May 06, 2012 (HOL) — Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dhismayaal cusub, iyadoo weli ammaankeedu uu yahay mid aan wanaagsanayn, waxaase dadku iyo madaxda dowladdu ay rajo ka muujinayaan in ammaanku uu sidan ka wanaagsanaan doono. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay dowladda KMG ah iyo Dastuurka cusub ee la doonayo in la ansixiyo 5/6/2012 2:55 AM EST